#Hudson-Odoi ayaa seegi doonta xili ciyaaredka inta ka harsan - Get Latest News From Horn of Africa
#Hudson-Odoi ayaa seegi doonta xili ciyaaredka inta ka harsan
Laacibka kooxda Chelsea Callum Hudson-Odoi ayaa shaaca ka qaaday heerka uu gaarsiisan yahay dhaawacii kasoo gaaray kulankii xalay ay wada ciyaareen dhigooda Burnley.
Chelsea ayaa bar-baro 2-2 ah la dhaafi weyday Kooxda Burnley kulan ka tirsan kulamada 35-aad ee horyaalka Premier league dalka England.
Hadaba Callum Hudson-Odoi ayaa ciyaarta kaddib wuxuu fariin uu kaga hadlayay daawacii lugta ahaa ee kasoo gaaray kulankii xalay ee Burnley wuxuu ku soo qoray boggiisa Twitter-ka wuxuuna yiri:
“Waxaan u maleenayaa inuu soo idlaaday xili ciyaadkeyga, kaddib dhaawacii iga soo gaaray dhanka lugta, waa inaan si adag u shaqeeyaa si aan dib garoomada ugu soo laabto anigoo ka awood badan sidii hore xili ciyaareedka soo aadan”.
Callum Hudson-Odoi ayaa dhaawacan soo gaaray qeybta hore ee ciyaarta wuxuuna awoodi waayay inuu sii ciyaaro, wuxuuna ugu dambeyn tababare Maurizio Sarri go’aansaday in uu ku badalo ciyaaryahanka reer Spain ee Pedro.
Dhinaca kale caawiyaha tababare Maurizio Sarri ee Gianfranco Zola oo ka hadlayay dhaawaca soo gaaray da’ayarkan kooxda Chelsea ayaa wuxuu yiri:
“Ma ahan dhaawac yar, waxaan u maleynayaa inuu yahay mid halis ah, balse ma sheegi karno heerka uu gaarsiisan yahay dhaawaciisa”.
“Ma hubo heerka dhaawaciisa, waxay ila tahay inay muhiim tahay inuu maro baaritaano caafimaad ee kala duwan, balse dhaawacan wuxuu u muuqdaa mid halis ah”.